Ogaden News Agency (ONA) – Beentii Itoobiya oo Dunidu Ogaatay & Iyadoo Wali Kusii Indho Adag.
Beentii Itoobiya oo Dunidu Ogaatay & Iyadoo Wali Kusii Indho Adag.
Posted by Dulmane	/ June 1, 2016
Itobiya waxay ahayd waligeedba dawlad ka go’aan caalamka oo aan haba yaraatee wax xidhiidh ah la ahayn dunida inteeda kale. Waa dawlad been ku nool ah oon u adkaysan karin in caalamka laga ogaado xaqiiqada ka jirta gudaheeda ee gaajada iyo dagaalada joogtada ah ay hadheeyeen. Waa dawladda 1aad ee caalamka aan ogolayn inay saxaafada ka qoraan waxyaaba aan soo marin haya’adaha sirdoonka iyo dacaayadda Itobiya. Waxaan la soconaa inay hadda ka hor calaaqaadkii diblomaasi ee u dhexeeyay iyaga iyo dawladda Qatar ay u jareen barnaamijyadii uusoo diyaariyay wariye Jaamac Nuur ee Aljazeera ay kasoo diyaariyeen halganka JWXO. Waxaa ku xigay inay dawladda Itobiya xooga saartay in aan lasoo daynin barnaamij laga daawana lahaa Al-Jazeera qaybta English-ka oo ku saabsanaa Saxafiyiintii u dhashay dalka Sweden ee laga qabtay xadka ka dibna been aan jirin maxkamadda lagu soo saaray. Waxaa ku xigay wareysigii Al-jazeera English ay la eelatay Hogaanka Arimaha Dibadda ee JWXO mudane Cabdiraxmaan Mahdi. Wareysigaasi waxay safaaradda Itobiya ee dalka Qatar xooga saartay in aan lasii daynin, hasa ahaatee uma suurtagalin wayna ku fashilantay.
Xukuumada gumaysiga Itoobiya oo ah been ku nool ayaa hada wada olole ay ku doonayaan in ay aduunka been iyo waxaan jirin ugu sheegaan. Nidaamka TPLF waxay dhaqan ka dhigteen in ay dadweynaha jiho wareeriyaan gaar ahaan xiliga ay taladu ku ciirto, kolkaasoo ay bandhigaan mashaariic aan jirin oo been abuur ah oy ku sheegayaan in ay qabteen iyagoo adeegsanaya warbaahinta ay dacaayadaha u samaysteen.
Dhinaca kale xukuumada wayaanaha iyo wakiiladeeda Ogadenia ujooga ayaa iyagoo ka jawaabaya wareysigii mudane Cabdiraxmaan Mahdi waxay adeegsadeen qoraa saldhigiisu yahay Adisababa oy usoo habeeyeen dhalinyaro ay ku sheegeen in ay ka tirsanaan jireen jabhada ONLF iyagoo leh waxaan ku qabanay dagaalo aan la galay jabhada ONLF. Sida laga wada dharagsan yahay dhalinta ay ciidanka Wayaanuhu ku hayaan magaalada jigjiga iyo gobolada Ogadenia waa dhalinyaro xoolo dhaqata ahaa oo reerahooda laga soo qaqabtay laguna hayo jeelasha wadanka. Xukuumada wayaanaha oon ka xishooonin been ay caadaysatay inay u sheego aduunka iyo dadka ay gumaysataba si ay dadka iyo caalmka u jiho wareeriyaan, ayaa meela badan ku fashilantay oo laga ogaaday.
Sida aan idiin soo tabinay todobaadkii hore xukuumada Itoobiya ayaa dunida usoo bandhigtay Sawiro iyo hub ay leeyihiin waa jabhad wadan kale lagusoo taba baray taas oo la ogaaday in ay sawiradan ahaayeen Sawiro uu maraykanku ku qabtay wadanka Iraaq.
Arimahaa oo lawada ogsoon yahay ayay xukuumada wayaanaha waxay kaloo soo bandhigtay, dad shacab ah oo ay ku sheegayaan in ay yihiin xubno dagaal yahano ah oo katirsan jabhada Ginbot 7 iyagoo leh waxaan ku qabanay dagaalkii askarta badan lagaga dilay ciidanka wayaanaha ee Kadhacay Gobolka Axmaarada.
Arintan ayaa ka dambaysay markii ciidanka wayaanaha ay aad uga xumaadeen askar badan oo laga laayay, waxayna sidii caadada u ahayd soo qaqabteen dad shacab ah oo ku noolaa deegaanka lagu laayay askarta gumaysiga oy aduunka ugu sheegeen in ay soo qabqabteen dagaalyahano katirsan Ginbot 7.